Banijya News | किन ल्याइयो नागरिकता अध्यादेश ? - Banijya News किन ल्याइयो नागरिकता अध्यादेश ? - Banijya News
काठमाडौं : नेपालको संविधानको धारा ११ मा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने अधिकार दिएको छ। तर, बेलैमा कानुन नबन्दा त्यो प्राप्त हुन सकेको थिएन। त्यसलाई ध्यान दिएर सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आइतबार संविधानको धारा ११४ (१) बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी भएको हो। कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठका अनुसार यसले नागरिकतासम्बन्धी ‘अन्यायमा परेका’ ठूलो संख्यालाई राहत दिनेछ। संविधानअनुसार ऐन नबन्दा करिब ३५ हजार नागरिकताका निवेदन थन्किएका थिए। स्थानीय प्रशासनले ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने भएकाले तिनले केही निर्णय दिन सकेका थिएनन्।
अदालतका निर्देशनहरू टार्दा–टार्दा सरकार हैरान भएपछि कानुनकै व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएको उनको भनाइ छ। संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार निर्माणका क्रममा जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई साथ दिएका थिए।
यो सरकारले संविधान संशोधन, विभिन्न अभियोगमा थुनिएका राजनीतिक बन्दी रिहा र नागरिकतासम्बन्धी ऐन संविधानमुताबिक बनाउने वचन दिएको उनीहरूको भनाइ थियो। धारा ७६ (५) अनुसार कुनै पनि दाबी स्वीकृत भएन। र, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटन भएको छ। त्यसको लगत्तै सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ। यसले मधेशको ठूलो समूह राहत महसुस गरिरहेको छ। विपक्षीले भने यसलाई ‘मधेश कार्ड’ भनेका छन्। यो अध्यादेशले २०७२ असोज ३ भन्दा अगाडि जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाका नाबालिग सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने बाटो खोलेको छ।
त्यस्तै नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता मिल्ने छ। त्यसरी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहरेका खण्डमा भने वंशजको नागरिकता कायम रहने छैन। वर्तमान संविधानभन्दा पहिला अन्तरिम संविधानमा यस्तै व्यवस्था गरिएको थियो।
त्यस क्रममा धेरै गैरनागरिकले समेत सहज ढंगले नेपाली नागरिकता पाएको गुनासो बढेको थियो। नागरिकता पाउन योग्य नेपालीले पनि पाएका थिएनन्। संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न ढिला हुँदा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। सरकारले संसद्मा लगेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि अड्किएको छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
र प्रधानमन्त्रीको भनाई यस्तो पनि
प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा जुन विद्येयक आएको छ त्यस्लाई प्रधानमन्त्रीले के कस्तो प्रतिृकया दिएका थिए त्यस्को भिडियो यतिखेर समाजिक संजालमा भाइरल भएको छ । उनले जुन अध्यादेश जारी गराएका छन्, कुनै बेला उनले त्यसैका विरुद्ध चर्काे भाषण गरेको भिडिओ अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओली भाषण गरिरहेको भिडिओ संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले पनि रिट्विट गरेका छन्। अनि लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओली…आवाज आफैं बोल्छ!’
भिडिओमा उनी भनिरहेका छन्, ‘नागिरकताको सवाल, नागरिकता नेपालीले पाउनुपर्छ। उहिले उहिले रानीको जन्मदिवसमा केटाकेटीलाई भेला गेर स्कुलमा चकलेट बाँडिन्थ्यो, नागरिकता चकलेट होइन, बोर्डरमा बसेर आउनेजतिलाई दिँदै जाने…।’
नागरिकता बिधेयक को बिरोध गर्नेले अध्यादेश किन ल्यायो ? अरु कुनै कुरो बुझ्न बाँकि छ र ? pic.twitter.com/s7GZSTy0x2
— Vimal Lamic (@juction4love) May 23, 2021